Nin Maraykan ah oo 7000 oo taariko arruursaday - BBC News Somali
Image caption Waxa halkan ka muuqda taargooyinka 50 gobol ee Maraykanka iyo qaar ka mid ah gobollada Canada
Nin lagu magacaabo Andrew Pang oo u dhashay dalka Maraykanka, kuna nool magaalada Arlington ee gobolka Virginia ayaa uruuyay kayd la yaab leh oo ah taargooyinka waddamada adduunka intooda badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Marka aad gashid garaashkiisa waxaa ku dhex yaala madxaf yar oo uu taargooyinka ku taxay darbiga.
Safka koowaad waxaa suran dhammaan taargooyinka 50 gobol ee Maraykanka, kan xiga waa 13 ka gobol ee Canada, kan ka sareeyana waa Mexico.
Waxa uu uruurinayay muddo 40 sano ah, waxana uu sheegay in uu hawshan bilaabay kadib markii nin ay saaxiibo ahaayeen oo fasax u aadi jiray gobol kale uu haddiyad ahaan ugu keenay hal taargo oo uu awoowgiis lahaa "Nin saaxiibkay ahaa, darisna ila ahaa ayaa fasax u aadi jiray gobolka Louisiana xagaa kasta, mar ayaan ku iri maad haddiyad ii keentid, kadibna wuxuu ii keenay taargo" ayuu yiri Andrew.
Image caption Andrew muddo 40 sano ah ayuu uruurinayay taargooyinka dalalka adduunka
Wixii markaas ka dambeeyay waxa uu bilaabay in uu uruuriyo taargooyinka, isaga oo sidoo kale danaynayay qariidadaha dalalka adduunka.
Markii uu 12 jir gaaray, Andrew waxa uu haystay taargooyinka dhammaan 50 gobol ee Maraykanka.
Gobol kasta oo Maraykanka ka tirsan waxa uu leeyahay taargo u gaar ah, taas oo marka uu waqtiga ka dhoco la iska iibiyo ama qof la siin karo.
Mar ayaa jirtay uu haweenay ka iibsaday kayd taargooyin ah oo uu ninkeeda ka dhintay, wuxuuna ka siistay lacag dhan $4,000.
Waxyaabaha isaga aad u xiiso galiyay ayaa waxaa ka mid ah naqshadaha taargooyinka iyo fariimaha ay gudbinayaan, tusaale sanadkii 1986-dii markii ay dhacday masiibadii dayac gacmeedkii Challenger, gobolka Florida waxa uu soo saaray taargo lagu xardhay sawirka Dayac Gacmeedka si kor loogu qaado wacyiga dadka oo xiligaas lacag yabooh ah laga uruurinayay si loogu fuliyo mashruuca xuska iyo xusuusta cirbixiyeenadii shilka ku dhintay.
Image caption Gobol kasta Maraykanka waxa uu leeyahay taargo u gaar ah, mid kastana waxaa ku xardhan astaan u gaar ah
Gobollada kale ee Maraykanka waxa ay leeyihiin astaamo kale sida gobolka Oregon oo leh astaan geed ah, halka gobolka North Dekota uu leeyahay xayawaanka madax kutiga.
Marka aad waddooyinka marayso waxaad kala garan kartaa gaadiidka wadada maraya gobolada ay ka kala yimaadeen , "waxaadna dareemaysaa waddanimo oo aan wada nahay American" ayuu yiri Andrew.
Waxaa jira urur ay leeyihiin dadka uruuriya taargooyinka oo ka kooban illaa 3,000 xubnood oo kala yimid 50 gobol ee Maraykanka iyo 19 dal oo adduunka ka tirsan, waxaana ururkan la asaasay sanadkii 1954-tii.
Qof kasta oo xubin ka ah ururka waxa uu heystaa kayd taargooyin ah, inkasta oo ay ku kala badanyihiin.
Lahaanshaha sawirka ANDREW PANG
Image caption Xiligii hore taargooyinka astaamo looma samayn jirin, balse mardambe ayaa la bilaabay in astaamo qurux badan loo sameeyo
Andrew isaga waxa uu haystaa inta u dhaxaysa 7,000 illaa 8,000 oo taargo, waxaa ka mid ah mid uu haddiyad ahaan uga heley amiirta boqortooyada dalka Monoco "1998-dii ayaan warqad u qoray amiirka Monoco oo aan ka codsaday in uu iisoo dhiibo taargo dalkiisa ah, marnaba maanan filanaynin in aan helayo, balse yaabka dhacay, todobaadyo kadib boostada ayaa ii keentay" ayuu yiri Andrew.
Taargooyinka uu heysto waxaa ka mid ah kuwa dalal horay u jiri jiray sida dalkii Bariga Jarmalka iyo gobollada lagu muransanyahay sida Ossetia-yada Koonfureed ee bariga Yurub.
Image caption Halkan waxaa ka muuqda taargooyinka dalalka Jasiiradaha ah qaarkood
Illaa 40 dal oo adduunka ka mid ah ayuusan wali haynin taargooyinkooda, waxaana ka mid ah magaalada Vatican-ka oo taargooyinkeeda aad loo illaaliyo.
Image caption Soomaaliya ayaa ka mid ah taargooyinka uu ninkan uruuriyay